လိင်တူသတင်း - eGay ဆိုင်
ရက်စွဲကိုသတင်းမှတက်, အလိင်တူချစ်သူကမ္ဘာမှထင်မြင်ချက်များနှင့်အတွေးအခေါ်များသင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှဆောင်ခဲ့ကြ၏။ တူသော Share ခြင်းနှင့်လူမှုရေးအရချိတ်ဆက်ပါ။
ထို့အပြင် Egay ချစ်သောသူရုံတချို့ sexy ယောက်ျားတွေ!
EthnoUniverse ပူပေါင်းဆောင်ရွက် Posted by ကို
အာဖရိကပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးလိင်တူချစ်သူဖြစ်ဖို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အများဆုံးဧညျ့ရာအရပျမဟုတျပါဘူး။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအလုံအလောက်အမြားအကြောင်းနှင့်ပါဝင်နိုင်ပါသည် "ဆေးပညာဆိုင်ရာစာမေးပွဲ။ " အဆိုပါ LGBTQ အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်အနိုင်ရရှိခုနှစ်တွင်တစ်ဦးကင်ညာတရားရုံးအတင်းအကျပ်စအိုစာမေးပွဲတရားမဝင်ဖြစ်ကြောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ တရားသူကြီး "စအိုစာမေးပွဲဖို့အသနားခံလွှာအောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ၏ဆောင်းပါးများ 25, 27, 28 နှင့် 29 အောက်ရှိအသနားခံပါ '' အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်" နှင့် "သူတို့တဘက်၌ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအတွက်အသနားခံလွှာ၏စအိုစာမေးပွဲမှတဆင့်ရရှိသောသက်သေအထောက်အထားများအသုံးပြုခြင်းအောက်မှာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ဟုဆိုသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ဆောင်းပါး 50 ။ "" အဆိုပါအာဏာရစအိုစာမေးပွဲများ၏အမျက်ရန်ဒါပေမယ့်လည်း၏အုပျခြုပျအကြောင်းမဲ့ခဲ့င်သူကိုလိင်တူဆက်ဆံ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားလိုက်နာထဲမှာမတစ်ခုသာကြီးမားခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် ...
အထူးသဖြင့်ဗြိတိန်နှင့်ရုရှား၌အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်ဆန္ဒပြမှုများ, ဆင်းရဲဒုက္ခမှအချို့သောအာရုံကိုဆောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ US မှာဆန္ဒပြမှုတွေကျဲဖြစ်ကြသည်။ အနည်းငယ်အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များကသံတမန်ရေးအရေးယူဘို့ကိုနှိပ်ထားပါသည်။
ဒါကြောင့်ဘင် de la Creme တကယ်ယခုအပတ်အိမ်ပြန်သနည်း?
ဘင်သို့မဟုတ်မကြာခဏခေါ်တော်မူအဖြစ် "De La" သူမတရားဝင်လက်ရှိ Rupaul ရဲ့ဆွဲပြိုင်ပွဲ Allstars3ထုတ်ဝေများ၏ကြာချိန်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုြိမ်နှင့်ရက်၏လက္ခဏာမပြနိုင်အောင်အဘယ်ကြောင့်သူမအစားမဲပေး၏ဤရက်သတ္တပတ်အိမ်မှာသူ့ကိုယ်သူပေးပို့ဖို့ကောလဟာလသတင်းများအရဖြစ်ပါတယ်ထားပြီး ယှဉ်ပြိုင်ချွတ်?